Ayaa Iska Leh Shirkadaada Raacdeysa Twitter-ka? | Martech Zone
Xisaab qurux badan oo xiiso leh oo ku saabsan New York Times sida Phonedog waxay dacwaynaysaa shaqaale hore si uu fursad ugu helo taageerayaasha Twitter-ka ee koontada uu u sameeyay oo qayb ka ah gaadhsiinta barahooda bulshada.
Marka loo eego heerarka shaqo ee hadda ka jira dalka, waxaan u maleynayaa in PhoneDog ay si buuxda ugu jirto xuquuqdooda… shaqada aad ku qabato waqtiga shirkadda caadi ahaan waa caadi leedahay shirkadda. Si kastaba ha noqotee, warbaahinta bulshada ayaa leh bedelay labadaba aragtida iyo isdhexgalka shirkadaha iyo shabakadooda. Waxay ahaan jirtay in dadku awoodeen inay gadaal istaagaan astaanta si loola xiriiro shabakada. Waxaan ku baranay xayeysiinta, noocyada, astaamaha, hal ku dhigyada iyo fursadaha kale ee kafaalo qaadka ah. Dhibaatadu waxay tahay in baraha bulshada ay hadda dadka geliyaan horteeda shirkadda iyo toos ula xiriirida sumadda. Aaminsanaantayda shaqsi ahaaneed ayaa ah, sababta oo ah warbaahinta bulshada ayaa bedeshay qulqulka wada xiriirka, qaababka lahaanshaha ayaa isbadalaya sidoo kale.
Hindsight had iyo jeer waa 20/20, laakiin waa wax fudud siyaasadda warbaahinta bulshada samayn lahaa tan hore. In kasta oo Phonedog ay ku guuleysan karto dagaalka sharci ee ah inay iyagu leeyihiin hindisaha iyo in kale, xaqiiqda ah inaysan qorshahan ku dejin siyaasadda warbaahinta bulshada ayaa ahayd qalad. Aragtidayda, waxaan si daacad ah u aaminsanahay in kiiskoodu aanu lahayn mudnaan ku saleysan tan keliya. Waxaan rumeysanahay inay had iyo jeer tahay mas'uuliyadda shirkadda inay dejiso rajada laga qabo shaqada iyo lahaanshaha.
Maaddaama uusan qofna lahayn kubad sixir ah, waxaad u baahan tahay inaad tan kaga fikirto shaqaalahaaga oo aad dejiso waxyaabaha ku habboon:
Hadaadan rabin shaqaalahaaga inay gaar ah kuwa raacsan, waxaad kaheli kartaa inay maareeyaan oo ay la xiriiraan koonto shirkadu maalgeliso. Tusaale: Halkii aan shaqaalaheena ka maamuli lahayn akoonadooda, waxaan siinaa iyaga marin @dknewmedia la Hootsuite iyo Kaydka. Waxaan ogaaday in dadka qaarkiis ay lahaan doonaan magaca shirkadda, halka magaca dhabta ah ee koontada ku jiraa uu yahay shaqaalaha. Waxaan rumaysanahay inay taasi dejiso rajo labadaba dhagaystayaasha iyo shirkadda leh koontada.
Waxaan ogaaday shirkado kale oo shaqaalahoodu iska diiwaangeliyeen Twitter iyagoo wata magac iyo magac isku dhafan. Tusaale ahaan, haddii aan rabo in shaqaale kasta uu yeesho akoon shirkadeed… Waxaa laga yaabaa inaan sameeyo @dk_doug, @dk_jenn, @dk_stephen, iwm Uma maleynayo inay tani tahay mid aad u xun oo loo wajaho, laakiin waan necbahay inaan arko soo socda weyn on account in ugu danbeyn laga tagay!
Xulashada ugu dambeysa, fekerkeyga, ayaa ugu fiican. U oggolow shaqaalahaaga inay dhisaan shabakadooda oo ay ilaashadaan. Waan ogahay inaad ka argagaxsan tahay tan, laakiin inaad awood u siiso shaqaalahaaga inay guuleystaan ​​waa awood. Waan jeclahay xaqiiqda ah in Jenn iyo Stephen labaduba badanaa waxay ka hadlaan DK New Media akoonadooda. Haddii ay dhisaan wax soo socda oo layaableh, waxaan u arkaa inay tahay waxtar inay nala shaqeeyaan oo ay tahay qiimo dheeri ah oo ay u keenaan shirkaddayda. Sidoo kale waa mas'uuliyaddayda inaan hubiyo inay faraxsan yihiin oo aan halkan ku hayn karo!
Bulshadu waxay ka bilaabataa dadka, maahan shirkad. Kuwa raacsan ma ahayn kuwa raacsan Phonedog… waxay qaddariyeen waxyaabaha gacanta lagu farsameeyay taas Nuux Kravitz awood u yeeshay inuu ku horumariyo magaca Phonedog. In kasta oo Phonedog laga yaabo inay lacag siisay Nuux, haddana waxay ahayd soo-jeediyaashii Nuux hibo u leh
Eraygaygii iigu dambeeyay ee kan: Waan necbahay ereyga gaar ah iyo lahaanshaha markay tahay shirkadaha, shaqaalaha iyo macaamiisha. Ma aaminsani in shirkad waligeed shaqaale leedahay sidoo kale waligood macaamiil ma lahan. Shaqaaluhu waa ganacsi… shaqo lacag ah. Macaamilku sidoo kale waa ganacsi… alaab lacag ah. Qofka shaqaalaha ah ama macaamilku waxay had iyo jeer xaq u leeyihiin inay ka baxaan xudduudaha heshiiskooda. Shirkad sida Phonedog u fekeraysa iyaga gaar ah kuwa raacsan ayaa laga yaabaa inay bixiyaan dhammaan caddaynta adduunka sababta ay u raacayaan Nuux ee aysan u raacin koontada Phonedog.
Tags: waqtiyada cusub ee yorknoah kravitztaleefandacwaynTwittertaageerayaasha twitter
29, 2011 at 11: 19 AM
Waan ka xumahay laakiin “milkiilayaasha” kaliya halkan waa kuwa raacsan.
29, 2011 at 12: 28 PM
Gabi ahaanba waan kugu raacsanahay, Jeff!